London University College - Fianarana in United Kingdom, Angletera
London University College Details
fanafohezan-teny : UCL
Créé : 1826
mpianatra (eo ho eo.) : 36000
Aza adino ny iaraho midinika ny London University College
Misoratra anarana ao amin'ny University College London
UCL naorina tao 1826 mba hanokatra ny fianarana ambony tany Angletera ho any ireo izay efa nesorina izany - ho lasa voalohany amin'ny oniversite tany Angletera mba hiaiky ny vehivavy mpianatra ao amin'ny mitovy tokony homarinana avy amin'ny olona ao amin'ny 1878.
Academic tsara sy ny fikarohana izay miresaka-tena izao tontolo izao olana mampahafantatra ny bita mandraka androany, ary dia ivon'ny ny 20-taona tetika, UCL 2034.
UCL manana ny tsara indrindra ny mpianatra akademika tahan'ny ao amin'ny UK (1:10), manampy kely habe sy miavaka kilasy tsirairay? Manohana (Times 2013).
UCL dia iray amin'ireo anjerimanontolo roa ambony ao amin'ny UK noho ny isan'ny mpampianatra, izay midika fa ny mpianatra dia ampianarina ny tena manam-pahaizana tena mahafeno fepetra ao amin'ny saha (Higher Education Statistics Agency 2011).
UCL dia manome tontolo iainana izay mampirisika ireo mpianatra mba ho fatra-paniry laza nefa manonofinofy. In 2013 irery, UCL ireo mpianatra nandray anjara tamin'ny 41,500 ora maro ny asa an-tsitrapo sy nanangana 80 orinasa ara-tsosialy sy ny 25 mpianatra raharaham-barotra.
UCL no mandrafitra ny olona niavaka: ambony mpampianatra sy ny mpianatra miavaka; -bahoaka andraikitra matihanina sy ny laboratoara teknisiana, ary ny hafa rehetra ny tapa-ny piozila izay mahaforona ny mpitarika anjerimanontolo.
Faculty ny Arts & Humanities
Ny UCL Faculty ny Zavakanto & Humanities dia malaza foiben'ny tsara indrindra, izay fikarohana ny mpitarika izao tontolo izao-toetra mamelona fandaharana mivantana tamin'ny tany rehetra ny fianarana.
Mpianatra soa avy amin'ny maro-pifehezana sakany ny fampianarana eo amin'ny sehatra maro toy ny teny anglisy, filozofia, grika & Latina, hebreo & Fianarana Jiosy mihoatra noho ny miaraka amin'ny 20 fiteny eoropeanina ankehitriny. Fandaharana dia hita avy amin'ny foibe ho an'ny fikarohana samihafa, ary ny sampam-pianarana koa ny Slade Tompon'ny maro Sekoly Fine Art, izay hatrany manampy ny velona ny vanim-potoana lahateny kanto, na nasionaly sy iraisam-pirenena.
Tsy mikendry ny hanampy ny mpianatra mba hanaraka ny fianarana ambony sy ny tombontsoany na tsaina sy hampivelatra manokana.
UCL teny Anglisy & Haisoratra
UCL grika & Latina
UCL hebreo & Jiosy Studies
UCL Sekolin'ny Eoropa Fiteny, Kolontsaina sy Society
UCL Slade Sekolin'ny Fine Art
The Bartlett, UCL ny Faculty ny Built Tontolo iainana
Isika no Bartlett: Maneran-UCL ny sampam-pianarana ny nanorina tontolo iainana. Ny fizarana span ny faritra manontolo ny fianarana sy ny fikarohana. tsirairay, dia hitarika ny sahany. ao amin'ny fiaraha-miasa, izy ireo vaovao hanana valiny ho maika izao tontolo izao ny olana. Amin'ny ankapobeny, izy ireo maneho izao tontolo izao-tari-dalan'ny, multidisciplinary sampam-pianarana, tafaray noho ny toe-tsaina tanteraka UCL.
Ny sekoly sy ny fizarana manarona fitsipika avy amin'ny trano sy ny drafitra, ny hery sy ny maneran-atsimo, ary niara-dia mandrafitra ny UK indrindra sy mitondra zava-baovao feno sampam-pianarana ny nanorina tontolo iainana.
Tsy manolotra feno ny fandaharana isan-karazany eo amin'ny tontolo iainana nanao saha, from undergraduate ny, nahazo diplaoma teny, ary koa ny amin'ny MRes sy ny doctorat ambaratonga. Izahay hiezaka koa ny sekoly isan-karazany ny vanin-taona mafana sy ny taranja fototra ary fa mitombo ny mpanatanteraka fandaharam-pampianarana ho an'ny mpitarika ho avy ao amin'ny tontolo iainana nanao asa matihanina.
Ny UCL Bartlett Center for Advanced maka sary Analysis
Ny UCL Bartlett Development Planning Unit
Ny UCL Bartlett Sekolin'ny Maritrano
Ny UCL Bartlett Sekolin'ny Construction & Fitantanana tetik'asa
Ny UCL Bartlett Sekolin'ny Fandaminana
UCL Institute for Tontolo Iainana Design sy ny Engineering
UCL Institute for Lova Maharitra
UCL Space Syntaxe Laboratory
Faculty ny Atidoha Sciences
Ny UCL Faculty ny Atidoha Sciences izao tontolo izao-dia manaiky nitarika fikarohana sy fampianarana ao amin'ny faritra izay miainga amin'ny lalana neural ampiasaina mba hifehy ny vatana (e.g. nandre, fahitana sy ny teny) ny cognition sy ny psikolojia, izay mamaritra ny fitondran-tenan'ny olombelona.
Izahay izao tontolo izao nekena ho mpitondra any an-tsahanay asa sy ny mpiasa sy ny mpianatra manintona avy maneran-tany. Amin'ny sampam-pianarana sy ny singa mamorona faritra miavaka sy mihetsiketsika tontolo iainana noho ny fianarana sy ny fikarohana.
UCL dia ny fikarohana Eoropa powerhouse in neuroscience. Laharana faharoa isika eo amin'izao tontolo izao, ary ny voalohany tany Eoropa,, in neuroscience sy ny fitondran-tena ny Thomson Isi Tena ilaina ny Science tondro, maherin'ny avo roa heny noho boky maro sy Citations toy ny andrim-panjakana Eoropeana hafa. UCL Neuroscience mpikaroka hiteraka ny 30% ao amin'ny firenena ny fandraisana anjaran'i Voatonona lava indrindra ao amin'ny boky sy gazety neuroscience, mihoatra noho ny indroa toraka oniversite hafa. In neuroimaging sy ny pitsaboana neurology, UCL mahatonga 65% ary 44% ny UK ny fandraisana anjaran'i indrindra eran-taratasy Voatonona lava, dimy heny ny an'ny manaraka UK andrim-panjakana ambony indrindra.
Ny Faculty ny atidoha Sciences miaraka ny toetsaina Fiainana Sciences, Medical Sciences sy Mponina Health Siansa mitambatra mba hamorona ny Sekolin'ny Fiainana & Medical Sciences. Ny Sekoly dia iray amin'ireo lehibe indrindra sy malaza indrindra aggregations ny manam-pahaizana ao amin'ny saha ary manana fampianarana maneran-malaza ho nampahafantarina ny fanapahana-tsisin'ny fikarohana. Ny SLMS Domains hanodidina ny sakan'ny asa fikarohana manerana ny Sekoly sivy ao anatin'ny fototra VONDRONA. Fikarohana ity dia natao ao amin'ny fiaraha-miasa amin'ny departemanta hafa UCL ary tohanan'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny NHS matoky, fikarohana filankevitra, fikambanana mpanao asa soa sy ny orinasa.
UCL Engineering mamonjy fikarohana sy ny fiofanana manerana ny lafiny rehetra amin'ny tontolo maoderina. Previous fianarana sy ny asa eto dia namoaka vokatra haingana vaksiny, fibre optic fifandraisana-sy ny foto-drafitrasa ny aterineto, ary mbola hanafaka izao tontolo izao-miovaova fanavaozana.
Ny mpianatra sy ny mpiasa dia nalaina avy manerana izao tontolo izao, rehetra eo akademika sy ny raharaham-barotra ny mpiara-miombon'antoka. Ny fampianarana foto-kevitra hifantoka amin'ny fandaharana izay manana fiantraikany eo amin'ny tontolo manodidina antsika, raha ny votoatiny dia nitondra ny tsara indrindra fikarohana iraisam-pirenena. Ireo mpikambana ao amin'ny sampam-pianarana mampiasa ny fahaizany Engineering manerana ny toeram-pampianarana sy foibe, ao anatin'ny UCL, ary ao amin'ny tontolo midadasika kokoa.
UCL Civil, tontolo iainana & Geomatic Engineering
UCL Electronic & herinaratra Engineering
UCL Sekolin'ny Management
UCL Medical Fizìka & Bioengineering
UCL Science, teknolojia, Injeniera ary Public Policy
Ny UCL Institute of Education dia izao tontolo izao-mpitarika sekoly ho an'ny fanabeazana sy ny siansa ara-tsosialy. naorina tamin'ny 1902, isika amin'izao fotoana izao dia manana mihoatra noho ny 7,000 mpianatra ary 1,000 mpiasa. Mavitrika isika amin'ny kaontinanta rehetra.
ao amin'ny 2016 QS filaharana, izahay napetraka voalohany eto an-tany ho an'ny fanabeazana ho an'ny taona fahatelo hazakazaka, mialoha ny Harvard, Stanford sy Melbourne. Izahay dia nahazo ny Queen ny Taonan'ny loka ho an'ny Fampianarana Ambony sy hitondra fanampiana ao 2014-16 ho an'ny "anjara amin'ny politika sy ny fampiharana ny fampianarana amin'ny iraisam-pirenena manodidina ny zava-baovao ara-tsosialy takatry fikarohana".
Efa nampiofana isika mihoatra noho ny 10,000 mpampianatra nandritra ny folo taona, ary tamin'ny Janoary 2014, izahay eken'ny Ofsted ho an'ny 'niavaka’ voalohany fanofanana mpampianatra amin'ny ambaratonga voalohany rehetra manerana fepetra, ambaratonga faharoa sy ny fianarana lavidavitra kokoa.
Tamin'ny farany indrindra Research Fanombanana Exercise, roa ampahatelon'ny 'ny boky dia notsaraina ho sehatra iraisam-pirenena sy manan-danja mihoatra ny fahatelo dia notsaraina ho' izao tontolo izao mitarika '. Ny hita ny faran'izay tsara no nisy fiantraikany governemanta fikarohana asa sy ny politika eo amin'ny faritra avy amin'ny tany am-boalohany taona ny fianarana ambony sy ny toeram-piasana ny fianarana. Isika apetraka ho an'ny fikarohana voalohany eo amin'ny fanabeazana hery ao amin'ny UK.
Koa izahay misahana ny fianarana sy ny fikarohana ao amin'ny fahasalamana, psikolojia sy ny longitudinal fampianarana, eo amin'ny faritra hafa amin'ny siansa ara-tsosialy. Ny fianarana telo no niteraka andiana miaramila Nisy fiantraikany lehibe nandritra ny taona maro ny politika ho an'ny fahasalamana, fitovian-jo sy ny tanora.
fandaharam-pianarana, Fanabeazan'Andriamanitra sy Fanombanana
Ny fianarana sy ny Leadership
Kolontsaina, Communication sy ny Media
Psikolojia sy ny Human Development
fanabeazana, Fampiharana sy ny fiaraha-monina
UCL Lalàna dia iray amin'ireo lalàna nitarika eran sekoly. Izany no nanolorana azy ho amin'ny henjana, multi-pifehezana sy mitondra zava-baovao ny fianarana ny lalàna ny lafiny rehetra, amin'ny tsara indrindra ho an'ny eran-teny manodidina izay lalàna miasa.
Amin'ny sampam-pianarana ambony-laharana ny fikarohana lehibe manao anjara ny hatsaran'ny ny fampianarana sy ny fanaraha-maso ny mpianatra. Izany ihany koa ny mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny lalàna, raha mitoetra famolavolana fomba ara-dalàna sy ny politika-bahoaka.
Ny London base dia manome fahafahana tsara hampiasana ny loharanon-karena ao ny tanàna efa Angletera ny afovoan-dalàna, varotra, bola sy ny kolontsaina.
Faculty Fiainana Sciences
Ny UCL Faculty Fiainana Sciences izao tontolo izao-dia manaiky nitarika fikarohana sy fampianarana, izay Mitambatra ny hery ny ny fototra UCL preclinical biolojika sy ny siansa. Ny asa sy ny mpiasa manintona ireo mpianatra avy amin'izao tontolo izao, ary miara-mamorona miavaka izy ireo, ary mihetsiketsika tontolo iainana ho an'ny mpianatra sy mpikaroka. Amin'ny sampam-pianarana ahitana ny Division ny Biosciences, ny UCL School ny Pharmacy, ny UCL MRC molekiolan'ny Laboratory for Cell Biology sy ny Gatsby kajy amin'ny solosaina, Neuroscience Unit.
Ny Faculty fiainana Sciences miaraka ny toetsaina ny Atidoha Sciences, Medical Sciences sy Mponina Health Siansa mitambatra mba hamorona ny Sekolin'ny Fiainana & Medical Sciences. Ny Sekoly dia iray amin'ireo lehibe indrindra sy malaza indrindra aggregations ny manam-pahaizana ao amin'ny saha ary manana fampianarana maneran-malaza ho nampahafantarina ny fanapahana-tsisin'ny fikarohana. Ny SLMS Domains hanodidina ny sakan'ny asa fikarohana manerana ny Sekoly sivy ao anatin'ny fototra VONDRONA. Fikarohana ity dia natao ao amin'ny fiaraha-miasa amin'ny departemanta hafa UCL ary tohanan'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny NHS matoky, fikarohana filankevitra, fikambanana mpanao asa soa sy ny orinasa.
Faculty ny matematika & Ara-batana Sciences
Ny Faculty ny matematika & Siansa ara-batana dia mahafaoka ny lojika, andrana sy fandalinana ny matematika izao rehetra izao. Front-tsipika fikarohana mamelona mivantana an-mampianatra fandaharana, ary ny mpianatra mandray soa avy fidirana amin'ny kilasy voalohany laboratoara trano. Amin'ny sampam-pianarana manatitra nahay ny telo taona sy efa-BSc taona Master's-haavon'ny MSci degre in vao misondrotra ary koa ny fomba nentin-drazana faritra akademika.
Amin'ny sampam-pianarana dia manome lehilahy iray tena ratsy ho an'ny maro foibem-pikarohana. Ireo manamora in-lalina, interdisciplinary fikarohana amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa eo amin'ny manam-pahaizana ao amin'ny sampam-pianarana, ary amin'ny faritra mifandray amin'ny injeniera sy Fiainana Siansa. Amin'ny sampam-pianarana ihany koa ny manana ny ambaratonga interdepartmental fandaharana: Siansa natoraly.
UCL Fizìka & astronomia
UCL Space & Climate Fizìka (Mullard Space Science Laboratory)
Faculty ny Medical Sciences
Ny UCL Faculty ny Medical Sciences miara-mitondra UCL Medical School sy fito ny UCL ny fisarahana sy Institiota, famoronana ny siansa ara-pitsaboana powerhouse ny fikarohana sy fampianarana.
Staff ao amin'ny sampam-pianarana izao tontolo izao-nitarika manatanteraka fikarohana sy fampianarana ao amin'ny faritra izay miainga amin'ny Oncology niparitaka be ny sela connective aretina sy am-bava ny fahasalamana. Amin'ny sampam-pianarana sy ny singa mamorona faritra miavaka sy mihetsiketsika tontolo iainana noho ny fianarana sy ny fikarohana.
Ny Faculty ny fitsaboana Sciences miaraka ny toetsaina ny Atidoha Sciences, fiainana Sciences, ary Mponina Health Siansa mitambatra mba hamorona ny Sekolin'ny Fiainana & Medical Sciences. Ny Sekoly dia iray amin'ireo lehibe indrindra sy malaza indrindra aggregations ny manam-pahaizana ao amin'ny saha ary manana fampianarana maneran-malaza ho nampahafantarina ny fanapahana-tsisin'ny fikarohana. Ny SLMS Domains hanodidina ny sakan'ny asa fikarohana manerana ny Sekoly sivy ao anatin'ny fototra VONDRONA. Fikarohana ity dia natao ao amin'ny fiaraha-miasa amin'ny departemanta hafa UCL ary tohanan'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny NHS matoky, fikarohana filankevitra, fikambanana mpanao asa soa sy ny orinasa.
Faculty ny Mponina Health Sciences
Ny UCL Faculty ny Mponina Health Sciences miara-mitondra fahaizana in Ankizy Health, Vehivavy sy ny Fahasalaman'ny Fananahana, Population Health, Global Health, pitsaboana fitsapana, Health ny Informatika sy ny Cardiovascular Science. Ny tanjona dia ny hamonjy miavaka fikarohana sy fampianarana ho an'ny hanatsarana ny fahasalaman'ny olombelona, ary ny nampiray saina hevitra izay mampahafantatra ny vatsim-pianarana sy ny asa fanabeazana dia mazava ho azy ny fiainana.
Ny fikarohana amin'ny sampam-pianarana elucidates ny biolojika, fitondran-tena ary ara-tsaina izay miasa manerana dingana olona iray ny fiainana, ary manerana ny taranaka, izay misy fiantraikany amin'ny fivoaran'ny aretina eo amin'ny mponina. Fikarohana ity dia mampahafantatra undergraduate, , nahazo diplaoma teny sy ny fampianarana arak'asa.
Ny Faculty ny Mponina Health Sciences, miaraka ny toetsaina ny Atidoha Sciences, Fiainana Sciences sy Fitsaboana Siansa mitambatra mba hamorona ny Sekolin'ny Fiainana & Medical Sciences. Ny Sekoly dia iray amin'ireo lehibe indrindra sy malaza indrindra aggregations ny manam-pahaizana ao amin'ny saha ary manana fampianarana maneran-malaza ho nampahafantarina ny fanapahana-tsisin'ny fikarohana. Ny SLMS Domains hanodidina ny sakan'ny asa fikarohana manerana ny Sekoly sivy ao anatin'ny fototra VONDRONA. Fikarohana ity dia natao ao amin'ny fiaraha-miasa amin'ny departemanta hafa UCL ary tohanan'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny NHS matoky, fikarohana filankevitra, fikambanana mpanao asa soa sy ny orinasa.
UCL Social & Historical Sciences sampam-pianarana
Ny UCL Faculty Sosialy & Historical Sciences maneho faritra ny fahalalana izay mivory humanities sy ny siansa. Ny zavatra mahaliana sy ny fomba ny sivy departemanta singa tsara manolotra fahafahana fikarohana zava-baovao sy ny fiaraha-miasa.
Ny departemanta tsirairay dia manana hery lehibe ao amin'ny fikarohana ny fitsipi-pifehezana. Ny sasany 200 akademika mpiasa mandray anjara amin'ny hetsika fampianarana manerana ny sampam-pianarana sy ny asa fikarohana dia Hameno noho ny an'ny efa ho 100 fikarohana staff. Ny sampan-draharaha ihany koa ny mitana toerana lehibe eo amin'ny fitomboan'ny UCL ny tambajotra ny interdisciplinary foibem-pikarohana.
UCL Institute ny Amerika
UCL Sekolin'ny slavonika & Eoropa Atsinanana Studies
UCL naorina tamin'ny 11 Febroary 1826 ambanin'ny anarana London University ho toy ny safidy ara-pivavahana ho an'ny anjerimanontolo ara-pivavahana ny Oxford sy Cambridge. London University Warden ny voalohany dia Leonard Horner, izay mpahay siansa voalohany ny lohany nisy oniversite Britanika.
Na dia eo aza ny finoana atao matetika fa ny filozofa Jeremy Bentham no mpanorina ny UCL, ny anjara mivantana dia voafetra amin'ny fividianana ny anjara No.633, amin'ny sandan'ny vola £ 100 tamin'ny sivy fizarana eo amin'ny Desambra 1826 ary Janoary 1830. In 1828 nataony hanendry namana iray mba hipetraka teo amin'ny filan-kevitra, ary amin'ny 1827 niezaka hanana ny mpianatra John Bowring voalohany voatendry ho mpampianatra teny anglisy na Tantara, fa amin'ny fotoana roa ireo ny kandidà nahomby. Izany dia midika fa raha ny hevitra mety ho pahefana, izy no tsy toy izany. Na izany aza dia amin'izao andro izao Bentham matetika heverina ho ny “ray ara-panahy” ny UCL, araka ny hevitra ifotony amin'ny fanabeazana sy ny fiaraha-monina dia ny fitaomam-panahy ho any amin'ny andrim-panjakana ny mpanorina, indrindra fa ny Scotsmen James Mill (1773-1836) ary Henry Brougham (1778-1868).
In 1827, ny seza politika Toe-karena ao amin'ny London University noforonina, niaraka tamin'i John Ramsay McCulloch ho toy ny voalohany am-perinasa, fananganana iray amin'ireo sampan-draharaha voalohany ny toe-karena tany Angletera. In 1828 ny oniversite tonga voalohany tany Angletera mba hanolotra teny Anglisy ho toy ny foto-kevitra sy ny fampianarana sy ny fitsaboana ny Classics nanomboka. In 1830, London University nanangana ny London University School, izay taty aoriana lasa College University School. In 1833, ny oniversite voatendry Alexander Maconochie, Sekretera amin'ny Royal Geographical Society, tahaka ny voalohany mpampianatra jeografia ao amin'ny UK. In 1834, University College Hospital (am-boalohany North London Hospital) misokatra ho toy ny fampianarana ho an'ny hopitaly ny University Medical School.
In 1836, London University dia voakambana amin'ny Royal Satan'ny ambanin'ny anarana University College, London. Tamin'izany andro izany, ny Oniversiten'i Londres noforonina ny mpanjaka Sata ho toy ny mari-pahaizana mandinika biraom-hanomezako ho an'ny mpianatra avy amin'ny sekoly sy kolejy mpikambana, amin'ny University College sy ny King College, London rehefa voalazany teo Sata ho toy ny mpiray roa voalohany.
Ny Slade Sekolin'ny Fine Art dia naorina tao 1871 taorian'ny bequest avy Felix Slade.
In 1878 ny Oniversiten'i Londres Nahazo sata iray fanampiny mahatonga azy io voalohany Britanika oniversite mba ho afaka ny loka diplaoma amin'ny vehivavy. Toy izany koa ny taona, Niaiky UCL vehivavy ny toetsaina ny Zavakanto sy ny Lalàna sy ny Siansa, na ny vehivavy dia mbola nahazo ny toetsaina ny injeniera sy ny Fanafody (ny afa-tsy ny antokony amin'ny fahasalamam-bahoaka sy ny fahadiovana). Raha milaza ho UCL no voalohany oniversite tany Angletera mba miaiky ny vehivavy amin'ny teny mitovy ny olona, avy amin'ny 1878, ny Oniversiten'i Bristol filazana io koa dia mahatonga, rehefa niaiky ny vehivavy avy amin'ny fototra (toy ny oniversite) in 1876. Armstrong College, ny nodimbiasany fanorenana Newcastle University, koa navelany hiditra ny vehivavy avy amin'ny fototra ao 1871, raha ny marina na dia tsy voasoratra mandra- 1881. Ny vehivavy dia niaiky ihany tamin'ny farany ny fianarana ara-pitsaboana nandritra ny Ady Lehibe Voalohany ao amin'ny 1917, na dia rehefa nifarana ny ady famerana ireo napetraka teny an-isa.
In 1898, Sir William Ramsay nahita ny zavatra krypton, néon sy ny xénon mpampianatra simia raha mitoetra ao amin'ny UCL.
In 1900 ny Oniversiten'i Londres i reconstituted ho federaly oniversite amin'ny didy vaovao nosarihana niakatra ambanin'ny University of London Act 1898. UCL, niaraka tamin'ny maro hafa kolejy any London, lasa sekoly ao amin'ny Oniversiten'i Londres. Raha ny ankamaroan 'ny andrimpanjakana-panorenana nihazona ny fizakantena, UCL dia natambatra tao an-University in 1907 ambanin'ny London University College (Transfer) Act 1905 ary very ny fahaleovan-tena ara-dalàna.
1900 koa nahita ny fanapahan-kevitra mba hanendry ny karamaina lohan'ny ny kolejy. Ny voalohany dia Carey amperinasa Foster, izay nanompo toy ny Principal (tahaka ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe tany am-boalohany) avy amin'ny 1900 ny 1904. Izy nandimby ny Gregory Foster (tsy misy fifandraisana), ary amin'ny 1906 ny anaram-boninahitra dia niova ho Provost mba tsy fikorontanana miaraka ny zokiny amin'ny University of London. Gregory Foster lahatsoratra nijanona tao mandra- 1929.
In 1906 Fanorenana ny Cruciform nisokatra ho toy ny vaovao an-trano University College Hospital.
Nanohana UCL fahasimbana be baomba nandritra ny Ady Lehibe Faharoa, anisan'izany ny Efitrano Lehibe sy ny Carey Foster Physique Laboratory. Ny voalohany mpianatra UCL gazety, Pi Magazine, Navoaka voalohany amin'ny 21 Febroary 1946. Ny Institute of Jiosy Fianarana nafindra ho UCL in 1959. Ny Mullard Space Science Laboratory dia naorina teo an 1967. In 1973, UCL lasa rohy iraisam-pirenena voalohany ny mpialoha làlana ny aterineto, ny ARPANET.
Na dia anisan'ireo UCL oniversite voalohany niaiky ny vehivavy araka ny fepetra mitovy araka ny fanaon'ny olona, in 1878, ny oniversite ny efi-trano ambony iombonana, ny Housman Room, foana ny olona ihany mandra- 1969. Rehefa afaka roa andrana nahomby ny sarimihetsika dia lasa fa tapitra fanavakavahana amin'ny firaisana ara-nofo amin'ny UCL. Izany no hanatontosana izany dia amin'ny Brian Woledge (Fielden Mpampianatra ny Frantsay amin'ny UCL avy 1939 ny 1971) ary David Colquhoun, tamin'izany andro izany ny tanora mpampianatra amin'ny fanamboarana fanafody.
In 1976, Sata vaovao indray ny ara-dalàna UCL fahaleovan-tena, Na dia mbola tsy misy ny hery loka azy manokana diplaoma. Eo ambanin'ny sata mifehy io fomba ofisialy ny oniversite nanjary fantatra amin'ny anarana hoe London University College, rehefa ara-dalàna teo aloha efa “University of London, University College” satria ny fampidirana ho ao an-University. Io anarana nandao ny faingo aloha ampiasaina amin'ny anaran'ny “University College, London”.
In 1986, UCL natambatra amin'ny Institute of Archaeology. In 1988 UCL natambatra amin'ny Institute of Laryngology & Otology, ny Sekoly Momba ny rantsambatana, ny Institute of Urology & Nanasa sy Middlesex Medical School Hospital.
In 1993 ny hanozongozona ny ao amin'ny Oniversiten'i Londres midika fa UCL (ary ny oniversite hafa) Nahazo governemanta mivantana mahazo fanampiana ara-bola sy ny zo manome University of London fiakarana ny tenany. Nanjary UCL ho noheverina ho toy ny mitana ny toeran'ny oniversite amin'ny marina ny azy.
In 1994 London University College ny Hopitaly NHS Trust dia naorina. UCL natambatra tamin'ny College miteny Sciences sy theInstitute ny fitsaboana maso, in 1995, ny Institute of Health Ankizy sy ny Sekolin'ny Podiatry in 1996 ary ny Institute of Neurology in 1997. In 1998 UCL natambatra tamin'ny Royal Free Hospital Medical School mba hamoronana ny Mpanjaka Free sy University Medical School College (anarana ny UCL Medical School tamin'ny Oktobra 2008). In 1999 UCL natambatra amin'ny Sekolin'ny slavonika sy Eoropa Atsinanana Fianarana ary ny Eastman Dental Institute.
Ny UCL Jill Dando Institute of Science Heloka Bevava, ny voalohany departemanta oniversite eto amin'izao tontolo izao natokana manokana ho fampihenana ny heloka bevava, Niorina tamin'ny 2001.
Soso-kevitra ho fiombonana eo UCL sy Imperial College London dia nambara tamin'ny 2002. Ny tolo-kevitra dia nampahatezitra mafy nanohitra UCL fampianarana mpiasa sy ny mpianatra sy ny AUT sendikà, izay nitsikera “faingana ny tsy mendrika sy ny tsy fisian'ny fifampidinihana”, mitarika ho amin'ny fandaozana ny UCL Provost Sir Derek Roberts. Ny bilaogy izay nanampy hampitsahatra Ny fanambarana, harovana, na dia ny sasany amin'ireo rohy izao tapaka: jereo ny David Colquhoun ny bilaogy, sy ny fa stylish kokoa Save UCL bilaogy, izay tantanan'ny David Conway, ny mpianatra, nahazo diplaoma teny ao amin'ny departementan'i l'Hebreo sy fampianarana jiosy.
Ny London Center for Nanotechnology dia naorina teo an 2003 ho toy ny mpiara barotra eo UCL sy Imperial College London.
Koa satria 2003, rehefa UCL Profesora David Latchman lasa Tompon'ny ny mpifanolo-bodirindrina Birkbeck, efa sandoka akaiky kokoa ny fifandraisana eo amin'izy roa lahy ireto University of London kolejy, ary manokana hatrany koa amin'ny departemanta roa. Mpiara foibem-pikarohana dia ahitana ny UCL / Birkbeck Institute for Tany sy Planetary Siansa, ny UCL / Birkbeck / IoE Center for Fampianarana Neuroscience, ny UCL / Birkbeck Institute ny Structural sy ny molekiola ao amin'ny zavamananaina, ary ny Birkbeck-UCL Center for Neuroimaging.
In 2005, UCL navela tamin'ny farany dia nampianatra azy manokana sy ny fikarohana diplaoma hanomezako fahefana sy ny mpianatra rehetra voasoratra anarana UCL vaovao avy 2007/08 UCL nahafeno fepetra amin'ny ambaratonga. koa in 2005, UCL nolaniana marika orinasa vaovao, eo ambany izay, ankoatry ny zavatra hafa, ny anarana London University College dia nosoloina ny tsotra initialism UCL rehetra pifandraisana ivelany. Dia araka izany taona vaovao lehibe £ 422 tapitrisa trano dia nisokatra ho an'ny University College Hospital amin'ny Euston Road, ny UCL sofina Institute naorina sy trano vaovao ho an'ny UCL Sekoly slavonika sy Eoropa Atsinanana Fianarana nosokafana.
In 2007, ny UCL Cancer Institute Novahana tamin'ny vao vita Paul O'Gorman Building. Tamin'ny volana Aogositra 2008 UCL niforona UCL Partners, akademika tobim-pahasalamana momba ny siansa, amin'ny Great Ormond Street Hopitaly ho an'ny ankizy NHS Trust, Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust, Royal London NHS Free Foundation Trust sy London University College Hopitaly NHS Foundation Trust. In 2008 UCL nametraka ny UCL School ny Angovo & Resources in Adelaide, Aostralia, ny voalohany ny toeram-pianarana ny oniversite Britanika ao amin'ny firenena. Ny Sekolin'ny dia monina any amin'ny manan-tantara Torrens Fanorenana any Victoria Square sy ny famoronana nanaraka fifampiraharahana eo UCL Vice Provost Michael Worton sy Australian Atsimo Premier Mike Rann.
In 2009, ny Yale UCL fiaraha-miasa dia naorina teo anelanelan'ny UCL, UCL Partners, Yale University, Fianarana ho Dokotera Yale sy Yale - New Haven Hospital. Io no fiaraha-miasa lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny na oniversite, sy ny sehatra efa taty aoriana no omena ny humanities sy ny siansa ara-tsosialy.
Tamin'ny Jona 2011, ny harena ankibon'ny tany orinasa BHP Billiton nanaiky hanome A $ 10 tapitrisa ny UCL mba bola ny fananganana fikambanana angovo roa - ny Angovo Policy Institute, mipetraka any Adelaide, ary ny Institute for Sustainable Resources, monina ao London. Tamin'ny volana Novambra 2011 UCL nanambara drafitra ny £ 500 tapitrisa fampiasam-bola lehibe indrindra ao amin'ny toeram-pianarana ny Bloomsbury 10 taona, ary ny fametrahana ny vaovao 23-hektara akaikin'ny toeram-pianarana ny Lalao Olaimpika tao Stratford Park ao atsinanan'ny London. Tsy nohavaozina ny drafitra ny fanitarana any Atsinanana sy ny volana Desambra London 2014 dia nanambara ny fikasana hanao fonenan'ny mpianatra UCL East sarona 11 hektara ary manome ho amin'ny 125,000m2 ny toerana ao amin'ny Queen Elizabeth Olaimpika Park. UCL Atsinanana dia ho tafiditra ao anatin'ny nomanina Olympicopolis izay mikasa ny hanova ny Olaimpika Park ho ara-kolontsaina sy ny fanavaozana izay UCL Hub dia hanokatra ny sekoly voalohany amin'ny famolavolana, foiben'ny andrana injeniera sy ny tranom-bakoka ny hoavy, miaraka amin'ny velona toerana ho an'ny mpianatra.
Ny Sekolin'ny Pharmacy, Oniversiten'i Londres natambatra tamin'ny UCL amin'ny 1 Janoary 2012, lasa ny UCL Sekoly Pharmacy ao amin'ny sampam-pianarana Fiainana Sciences. Amin'ny Mey 2012, UCL, Imperial College London sy ny orinasa Intel Semiconductor nanambara ny fametrahana ny fiaraha-miasa Intel Research Institute for Sustainable mifandray Cities, ny London-monina institiota ho an'ny fikarohana eo an-hoavin'ireo tanan-dehibe.
Tamin'ny volana Aogositra 2012 UCL Nahazo tsikera noho ny dokam-barotra handraisam-bola ny fikarohana toerana; izany taty aoriana niala ny dokambarotra.
UCL sy ny Institute of Education namorona stratejika fifanarahana tamin'ny Oktobra 2012, anisan'izany ny mpiara-niasa tamin'ny fampianarana, fikarohana sy ny fampandrosoana ny sekoly London rafitra. Tamin'ny Febroary 2014 ny andrim-panjakana roa no nanambara ny fikasany mampiray sy Ny fanambarana vita tamin'ny Desambra 2014.
Tamin'ny volana Oktobra 2013 dia nanambara fa ny fianarana Translation Unit ny Imperial College London dia nifindra tany UCL, lasa tafiditra ao anatin'ny UCL Sekoly Eoropa Fiteny, Kolontsaina sy Society. Tamin'ny volana Desambra 2013, no nanambarana fa UCL sy ny famoahana akademika orinasa dia miara-miasa Elsevier nanorina ny UCL Big Data Institute. Tamin'ny volana Janoary 2015 dia nanambara fa UCL efa voafidy ny UK governemanta mba ho iray amin'ireo mpanorina dimy mpikambana ao amin'ny Alan Turing Institute (miaraka amin'ny anjerimanontolo ny Cambridge, Edinburgh, Oxford sy Warwick), ny Institiota mba hampitoerina ao amin'ny Tranomboky Britanika mba hampiroborobo ny fampandrosoana sy ny fampiasana ny efa mandroso matematika, informatika, algorithms sy Big Data.
In 2015 UCL nametraka vaovao Management Sekolin'ny mifantoka amin'ny teknolojia, zava-baovao sy ny fandraharahana, fanoloana ny Department of Management Science sy Innovation. Tsy Nifindra tany Kanada One Square, Canary ariary in May 2016.
Ianao ve mila iaraho midinika ny London University College ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
London University College ao amin'ny Map
Photos: London University College ofisialy Facebook
London University College Hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny London University College.
University of Kent Cantorbéry